गल्कोटका दुई मोटरेबल पुल तीन वर्ष देखी अलपत्र | Online Galkot News
सडक डिभिजन र ठेकदारको मिलिभगतले गल्कोटका दुई मोटरेबल पुल तीन वर्ष देखी अलपत्र !
सांसद देबेन्द्र पौडेलको नजरमा कहिले पर्लान गल्कोट यी अलपत्र पुलहरु ?
गल्कोट २०७५ मंसिर ५ । गल्कोट हटिया शिवालयघाटको मोटरेवल पुल र गल्याङ-पचुवा जोड्ने दरमखोलाको मोटरेबल पुल निर्माणमा चरम ढिलाई भएको छ । शिवालय घाटको पुल यसै मंसिर महिना भित्र निर्माण कार्य सम्पन्न गरिसक्नुपर्ने सम्झौता भएपनि पुल निर्माणको कार्य महिनौ दिन देखी ठप्प छ । पचुवा पुल सम्पन्न गर्ने म्याद आउदो माघ महिना सम्म रहेकोे छ ।
सहकर्मी गुमानसिँह भण्डारीका अनुसार नेपाल सरकार सडक विभाग अन्तरगत जुम्ली आचार्य निमार्ण सेवाले जिम्मा लिएको शिवालय घट पुलको करिब ६० प्रतिशत कार्य सम्पन्न भएको छ । ७।८ महिनासम्म निरन्तर काम सञ्चालन भएपनि पछिल्लो समय पुल निर्माण कार्य अलपत्र परेको स्थानियको भनाई छ ।
शिवालय घाटको अलपत्र पुल गल्कोट महोत्सवमा सरसफाई गरिएको अवस्थामा ।
गत असार महिनामा पुलका ठेकेदार कुमार खड्कालाई पुल निर्माण कार्य कहिले सम्पन्न हुन्छ ? भन्ने प्रश्नमा आगामि मंसिर महिनामा पुलबाट गाडी गुड्ने बताएका थिए । तर अहिले सम्पर्क गर्दा सडक डिभिजन कार्यालयले बेरिङ ल्याउने बिषयमा अनुमति पत्र नदिएका कारण पुल निर्माणको कार्य अगाडि बढ्न नसकेको बताएका थिए ।
सड्क डिभिजन कार्यालय बागलुङका प्रमुख थानेश्वर खत्रीलाई सम्पर्क गर्दा यस बिषयमा आफुलाई जानकारी नभएको बताए । उनले पुलको साईट ईन्जिनियर चण्डेश्वर शाहलाई सम्पुर्ण जानकारी भएको र यस बिषयमा आफुले समेत शाहलाई बुझ्न आग्रह गर्ने बताएका थिए । यसैबीच डिभिजन प्रमुख खत्री केहि दिन पहिले बागलुङबाट सरुवा भएका छन् । उता पुलका ईन्जिनियर चण्डेश्वर शाहलाई सम्पर्क गर्दा फोन उठ्दैन ।
पचुवाको पुल पहिलो वर्ष यत्ति काम गरेर रकम बुझेर गएका ठेकदार गत असार महिनामा मात्र देखिएका थिए ।
पुलका ठेकेदार खड्काका अनुसार अव तत्काल सडकले स्वीकृति दिएपनि पुल निर्माणको कार्य आगामि असार मसान्त सम्म लाग्ने बताए । बेरिङका लागी भारतमा जानुपर्छ, त्यहाँबाट ल्याउनका लागी करिब १ महिना लाग्छ त्यसपछि हामी काम सुरु गर्छौ खड्काको भनाई छ । खड्काले यसअधि पुल निर्माणका लागी सड्क डिभिजन कार्यालयले रकम दिनमा आनाकानी गरिरहेकाले आफुहरुले काममा ढिलाई गरेको स्विकार गरे । निर्माण कम्पनीले म्याद थपका लागी समेत पत्र बुझाएको खड्काले ईबागलुङलाई जानकारी दिए । दुवै कामको पत्र बुझाए पनि सड्क डिभिजन कार्यालयले कुनै प्रतिक्रिया नदिएको उनको आरोप छ । कुल ३ करोड ७ लाखको लागतमा २८ महिनामा सम्पन्न गर्ने गरी सम्झौता भएको पुल निर्माणको म्याद आगामि मंसिरमा सकिने छ । शिवालय घाटको पुल मंसिर महिनाभित्र सम्पन्न गर्ने आशा अब तुहिएको छ । अब निर्धारित समयमा त नसकिने भो, ठेक्का सम्झौता गरि समय थपेर भएपनि २०७६ असार मसान्त भित्र पुल बनाउने खड्काले बताए । पुल निर्माणको बिषयमा ठेकदार र सड्क डिभिजन कार्यालय इन्जिनियर शाह एकार्कालाई अरोप प्रत्यारोप गरि उम्कने गर्दा गल्कोटबासीलाई समस्या परेको छ ।
उता गल्कोट नगरपालिका ९ मल्म गल्याङ देखी गल्कोट नगरपालिका ८ काँडेवास पचुवा जोड्ने दरमखोलाको सो पुल सम्पन्न गर्ने म्याद आउदो माघ महिना सम्म रहेकोे छ ।माटरेबल पुलपनि आवको अन्तिम महिना असारमा काम गरेजस्तो गरी सडक डिभिजन कार्यालयका प्रमुखलाई टाकटुक मिलाएर रकम बुझेर साउन देखी अहिले सम्म निर्माण कार्य अलपत्र छोडेर ठेकदार टाप कसेको सहकर्मी मित्र खरेलले जानकारी दिएका छन् । रु ५ करोड भन्दा बढी लागतको निर्माणाधीन
असारमा केहि दिन काम गरेर रकम बुझेर गएका पचुवा पुलका ठेकदार रविन जोशी फर्किएनन् ।
कार्यालयमा टाकटुक मिलाए पछी पुलको निर्माण सम्वन्धमा सोधनी पुछनी केहि नहुने भएकाले ठेकदारहरु निर्धक्क छाती फुलाएर हिँड्ने प्रवृत्ति बढेको चर्चा व्याप्त छ । करोडौँको लागतका मोटरेबल पुलहरु तीन वर्ष देखी अलपत्र रहँदा पनि चासो नराख्ने सडक डिभिजन प्रमुख र साईट ईन्जिनियरहरुको मिलिभगतका कारण निर्माण कार्यमा सुस्ती आएको बुझ्न जिल्लावासीलाई गाह्रो छैन ।
सडकका ईन्जिनियरहरुको चूरीफूरी नै अर्को छ, कसैलाई नटेर्ने, कसैले भनेको नसुन्ने, ठेकदारसंग कुरा मिलाएपछी सबै खत माफ दिने गरेर नै करोडौँका निर्माण योजनाहरु धराशायी बनिरहेको पीडितहरुको आरोप छ ।
हाम्रा प्रतिनिधी सभा सदस्य देबेन्द्र पौडेलको नजरमा यी झण्डै बेबारिसे अवस्थामा देखिने मोेटरेबल पुलहरु, कहिले पर्लान ? भनि गल्कोटबासी जनता पिरलो गरिरहेका छन् । मध्यपहाडी लोकमार्गकै छेउमा रहेका यी निर्माणाधीन अवस्थामा अलपत्र रहेका पुलहरुको शीघ्रती शीघ्र निर्माण हुन सम्वन्धित निकायमा माग गरिदिन आग्रह समेत गरेका छन् ।